Abhimereki anova mambo muShekemu (1-6)
Chirevo chaJotamu (7-21)
Kutonga kweutsinye kwaAbhimereki (22-33)
Abhimereki anouraya vanhu vemuShekemu (34-49)
Mumwe mukadzi anokuvadza Abhimereki; Abhimereki anofa (50-57)
9 Nekufamba kwenguva, Abhimereki+ mwanakomana waJerubhaari akaenda kuhanzvadzi dzaamai vake kuShekemu, akataura nadzo nemhuri yese yasekuru vake* achiti: 2 “Ndibvunzireiwo vatungamiriri* vese veShekemu kuti, ‘Ndezvipi zviri nani kwamuri, kuti vanakomana vese 70 vaJerubhaari+ vakutongei kana kuti murume mumwe chete akutongei? Uye yeukai kuti ndiri pfupa renyu nenyama yenyu.’”* 3 Saka hanzvadzi dzaamai vake dzakataura mashoko aya dzichimumiririra kuvatungamiriri vese veShekemu, uye mwoyo yavo yakanga yava kuda kutevera Abhimereki, nekuti vakati: “Ihama yedu.” 4 Vakabva vamupa masirivha 70 akabva muimba* yaBhaari-bheriti,+ uye Abhimereki akaashandisa kubhadhara varume vaiva nhubu uye vasina zvekuita, kuti vamuperekedze. 5 Akabva aenda kuimba yababa vake kuOfra,+ akauraya vana vababa vake,+ vanakomana vaJerubhaari, varume 70, padombo rimwe chete. Jotamu mwanakomana wegotwe waJerubhaari ndiye chete akapona, nekuti akahwanda. 6 Vatungamiriri vese veShekemu neBheti-miro yese vakabva vaungana, vakagadza Abhimereki kuti ave mambo,+ pedyo nemuti mukuru, pambiru yaiva muShekemu. 7 Pavakazviudza Jotamu, akabva aenda akanomira pamusoro peGomo reGerizimu,+ akashevedzera kwavari nenzwi riri pamusoro achiti: “Nditeererei, imi vatungamiriri veShekemu, uye Mwari achabva akuteererai. 8 “Pane imwe nguva miti yakaenda kunozodza mambo wayo. Saka yakati kumuti wemuorivhi, ‘Titonge.’+ 9 Asi muorivhi wakati kwairi, ‘Ndingasiya mafuta angu avanokudza nawo Mwari nevanhu, kuti ndiende kunozunguzwa nemhepo ndichioneka pamusoro pemimwe miti here?’ 10 Miti yakabva yati kumuonde, ‘Uya utitonge.’ 11 Asi muonde wakati kwairi, ‘Ndingasiya kutapira kwangu nemichero yangu yakanaka kuti ndiende kunozunguzwa nemhepo ndichioneka pamusoro pemimwe miti here?’ 12 Pashure pacho miti yakati kumuzambiringa, ‘Uya utitonge.’ 13 Muzambiringa wakaipindura uchiti, ‘Ndingasiya waini yangu itsva inoita kuti Mwari nevanhu vafare kuti ndiende kunozunguzwa nemhepo ndichioneka pamusoro pemimwe miti here?’ 14 Miti yese yakazoti kurukato, ‘Uya utitonge.’+ 15 Rukato rwakabva rwati kumiti yacho, ‘Kana muri kundizodza zvechokwadi kuti ndive mambo wenyu, uyai muhwande pasi pemumvuri wangu. Asi kana musiri, moto ngaubude murukato upise miti yemisidhari yekuRebhanoni.’ 16 “Pamakagadza Abhimereki kuva mambo,+ zvaiva zvemwoyo wese uye zvakarurama here? Makaitira Jerubhaari neimba yake zvakanaka here, uye makamuitira zvakamukodzera here? 17 Baba vangu vakaisa upenyu hwavo* pangozi pavakakurwirai,+ kuti vakununurei muruoko rwaMidhiyani.+ 18 Asi nhasi mapandukira imba yababa vangu mukauraya vanakomana vavo, varume 70, padombo rimwe chete.+ Mabva magadza Abhimereki, mwanakomana wemurandasikana wavo,+ kuva mambo wevatungamiriri veShekemu nekungoti ihama yenyu chete. 19 Chokwadi, kana muri kuitira Jerubhaari zvakanaka uye zvakarurama, farirai Abhimereki uye iyewo ngaakufarirei. 20 Asi kana zvisiri izvo, moto ngaubude muna Abhimereki upise vatungamiriri veShekemu neBheti-miro,+ uye moto ngaubude muvatungamiriri veShekemu neBheti-miro upise Abhimereki.”+ 21 Jotamu+ akabva atiza akaenda kuBheeri, ndokugara ikoko nekuti aitya mukoma wake Abhimereki. 22 Abhimereki akatonga Israeri* kwemakore matatu. 23 Mwari akabva aita kuti pakati paAbhimereki nevatungamiriri veShekemu pave neruvengo,* uye vakanyengera Abhimereki. 24 Akaita izvi kuti atsive umhondi hwakaitirwa vanakomana 70 vaJerubhaari, kuitira kuti mhosva yekudeura ropa ravo ive pamwana wababa vavo Abhimereki nekuti akavauraya,+ uye pavatungamiriri veShekemu nekuti vakamubatsira kuuraya vanakomana vababa vake. 25 Saka vatungamiriri veShekemu vakaisa vanhu kuti vamuhwandire pamusoro pemakomo, uye vaibira vanhu vese vaipfuura nepavaiva mumugwagwa. Nekufamba kwenguva, Abhimereki akaudzwa nezvazvo. 26 Gaari mwanakomana waEbhedhi nehama dzake vakabva vayambuka kuShekemu, uye vatungamiriri veShekemu+ vakatanga kuvimba naye. 27 Vakabva vabuda vakapinda mumunda, vakakohwa mazambiringa emuminda yavo, vakaasvina, vakaita mutambo, vachibva vazopinda muimba yamwari wavo+ vakadya nekunwa, vakatuka Abhimereki. 28 Gaari mwanakomana waEbhedhi akabva ati: “Abhimereki ndiani, uye Shekemu ndiani kuti timushandire? Haasi mwanakomana waJerubhaari,+ uye Zebhuri haasi jinda rake here? Shandirai vanakomana vaHamori, baba vaShekemu! Neiko tichifanira kushandira Abhimereki? 29 Kudai vanhu ava vaiva pasi pangu, ndaizobvisa Abhimereki.” Akabva ati kuna Abhimereki: “Wedzera uto rako ubude tizorwa.” 30 Zebhuri muchinda weguta paakanzwa mashoko aGaari mwanakomana waEbhedhi, akatutuma nehasha. 31 Saka akabva atuma nhume muchivande* kuna Abhimereki, achiti: “Inzwa! Gaari mwanakomana waEbhedhi nehama dzake vava muShekemu, uye vari kukuchidzira guta kuti rirwe newe. 32 Saka uya usiku, iwe nevarume vako, uvahwandire musango. 33 Zuva parinongobuda mangwanani, unofanira kukurumidza kumuka, worwisa guta; uye iye nevarume vake pavanobuda kuzokurwisa, ita zvese zvaunogona kuti umukunde.”* 34 Saka Abhimereki nevanhu vese vaaiva navo vakamuka usiku, vakahwandira Shekemu vari mumapoka mana. 35 Gaari mwanakomana waEbhedhi paakabuda akanomira pagedhi reguta, Abhimereki nevanhu vaaiva navo vakabva vasimuka kubva pavakanga vakahwandira. 36 Gaari paakaona vanhu vacho, akati kuna Zebhuri: “Tarisa uone! Kune vanhu vari kuburuka vachibva pamusoro pemakomo.” Asi Zebhuri akati kwaari: “Uri kuona mimvuri yemakomo sevanhu.” 37 Pava paya Gaari akati: “Tarisa uone! Kune vanhu vari kuburuka vachibva pakati penyika, uye rimwe boka riri kuuya nenzira yekumuti mukuru weMeonenimu.” 38 Zebhuri akati kwaari: “Zvino kuzvikudza kwako kuya kuri kupi kwawaiita uchiti, ‘Abhimereki ndiani kuti timushandire?’+ Ava havasi ivo vanhu vawakaramba here? Buda iye zvino urwe navo.” 39 Saka Gaari akabuda akaenda ari pamberi pevatungamiriri veShekemu, akarwa naAbhimereki. 40 Abhimereki akadzingirira Gaari, uye Gaari akamutiza, uye vakawanda vakaurayiwa vakasara vakati katakata kusvika pagedhi reguta. 41 Abhimereki akaramba achigara muAruma, uye Zebhuri+ akadzinga Gaari nehama dzake muShekemu. 42 Zuva rakatevera racho vanhu vakabuda vachienda musango, uye Abhimereki akaudzwa nezvazvo. 43 Saka akatora vanhu, akavakamura kuva mapoka matatu, akaramba akahwandira musango. Paakaona vanhu vachibuda muguta, akavarwisa akavauraya. 44 Abhimereki nemapoka aaiva nawo vakamhanya vakanomira pagedhi reguta, ukuwo mapoka maviri achirwisa vese vaiva musango, uye vakavauraya. 45 Abhimereki akarwa neguta racho zuva iroro rese, achibva aritora. Akauraya vanhu vaiva mariri, akaparadza guta racho,+ akarimwaya munyu. 46 Vatungamiriri vese veshongwe yeShekemu pavakazvinzwa, vakabva vaenda muimba* yaiva pasi pevhu mutemberi* yaEri-bheriti.+ 47 Abhimereki paakangoudzwa kuti vatungamiriri vese veshongwe yeShekemu vakanga vaungana, 48 akabva akwira muGomo reZarimoni nevarume vese vaaiva navo. Abhimereki akatora demo akatema bazi remuti, akariisa papfudzi rake, akati kuvanhu vaaiva navo: “Kurumidzai kuita zvamaona ndichiita!” 49 Saka vanhu vese vakatemawo mapazi vakatevera Abhimereki. Vakabva vaisa mapazi acho paimba yacho yepasi, vakaitungidza nemoto. Saka vanhu vese veshongwe yeShekemu vakafawo, varume nevakadzi vanenge 1 000. 50 Abhimereki akabva aenda kuTebhezi. Akadzika musasa kuti arwe neTebhezi achibva aitora. 51 Pakati peguta racho paiva neshongwe yakasimba, uye varume nevakadzi vese nevatungamiriri vese veguta racho vakatizira imomo. Vakazvivharira imomo vakakwira pamusoro pedenga reshongwe. 52 Abhimereki akaenda kushongwe yacho akairwisa. Akabva aenda kumusuo weshongwe yacho achida kuipisa nemoto. 53 Mumwe mukadzi akabva akanda huyo mumusoro maAbhimereki akamutsemura dehenya.+ 54 Abhimereki akabva angoshevedza mushandi wake akanga akatakura zvombo zvake akati kwaari: “Vhomora bakatwa rako undiuraye, kuti vasazoti nezvangu, ‘Akaurayiwa nemukadzi.’” Saka mushandi wake akamubaya, achibva afa. 55 Varume veIsraeri pavakaona kuti Abhimereki akanga afa, vese vakabva vadzokera kumba. 56 Saka Mwari akatsiva Abhimereki nekuda kwezvakaipa zvaakanga aitira baba vake paakauraya vanakomana vavo 70.+ 57 Mwari akaitawo kuti zvakaipa zvese zvevarume veShekemu zvivadzokere. Saka kutuka kwaJotamu+ mwanakomana waJerubhaari+ kwakauya pavari.
^ ChiHeb., “nemhuri yeimba yababa vaamai vake.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “varidzi venyika.”
^ Kana kuti “ndiri hama yenyu chaiyo.”
^ Kana kuti “akazviita muchinda weIsraeri.”
^ ChiHeb., “pave nemweya usina kunaka.”
^ Kana kuti “neunyengeri.”
^ Kana kuti “muitire zvinokwanisa kuitwa neruoko rwako.”
^ Kana kuti “munhare.”
^ Kana kuti “muimba.”